"ကိုယ့်မိဘကို မသတ်မိပါစေနဲ့" . .မိဘကို အသက်သေအောင် သတ်မှ သတ်တာမဟုတ်ပါဘူး. . - Myanmar People Alliance
“ကိုယ့်မိဘကို မသတ်မိပါစေနဲ့” . .မိဘကို အသက်သေအောင် သတ်မှ သတ်တာမဟုတ်ပါဘူး. .
admin · Posted on October 28, 2019 October 28, 2019
“ကိုယ့်မိဘကို မသတ်မိပါစေနဲ့! မိဘကို အသက် အသက်သေအောင် သတ်မှ သတ်တာမဟုတ်ပါဘူး”. .သဒ္ဓါတရားမရှိတဲ့ မိဘကို. သဒ္ဓါတရားရှိအောင် ဖန်တီးမပေးနိုင်ရင်….
အိုမင်းမစွမ်းတဲ့ မိဘကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ပြုစုမပေးပဲ မျက်နှာလွဲခဲပစ် လုပ်နေရင်..၊ကိုယ်ကတော့ ကောင်းကောင်းစားနေပြီး မိဘတွေကတော့ ကိုယ့်လောက် ကောင်းအောင် မစားရဘဲ ချို့တဲ့နေပြီဆိုရင်…
ပင်ပန်းကြီးစွာ ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့ မိဘတွေကိုကူညီနိုင်ပါလျှက် မကူညီခဲ့ဘူးဆိုရင်. .အဲ့ဒါတွေထဲက တချက်ချက်နဲ့ငြိနေမယ်ဆိုရင်လည်း မိဘကို သတ်နေတာပါပဲ. . . .
ဒီဘဝ တစ်သက်တာမှာ မိဘတွေ “တစ်ဘဝပဲ သေမှာပါ” သဒ္ဓါတရားမရှိဘဲ. .သေသွားရင် ဝိပဿနာတရားတွေထွန်းကားနေပါလျှက်…ကိုယ့်မိဘ ဝိပဿနာတရားတော်ကို မထိတွေ့ရပဲ. .သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မိဘကို တစ်သံသရာလုံး သတ်နေသလိုပါပဲ. .
ကိုယ် တရားမဟောနိုင်တောင် ရိပ်သာတော့ ရောက်အောင်ပို့ ပေးကြရမယ်။ ရိပ်သာမသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင် အိမ်မှာ ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်တွေကို နာနိင်အောင် ရှု့မှတ်တတ်အောင် စီစဉ်ပေးနိုင်ရမယ်. . . .
ကိုယ့်ကို ပညာတတ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နေရလို့ သူတိုမှာ တရားဘာဝနာကို ငယ်ငယ်က အားထုတ်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး..။ကိုယ်က ပညာတတ်လို့ပြန်ပြီး ပြုစု ရမယ့် အလှည့်ရောက်တဲ့အခါမှာ မိဘကို တရားနဲ့ ကျေးဇူးမဆပ်နိင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီသားသမီးဟာ မိဘကိုသတ်နေတာပါပဲ. . ။သားကောင်းသမီးကောင်းများ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ. . ။(ဦးမြင့်​ခိုင်​)
မိဘကို ငွေကြေး/စားစရာများနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်သလို တရားဘာဝနာများ အားထုတ်နိုင်အောင်လည်း ကူညီပံ့ပိုး စီစဉ်ပေးကြပြီး ကျေးဇူးဆပ်ကြရပါမယ်။
မိဘတွေက ကိုယ့်ကို သူတို့ရဲ့ ချွေးစက်တွေနဲ့ ရုန်းကန်ရှာဖွေကာ ပုခုံးထမ်းပြီး အမြင့်ရောက်အောင် ပညာတွေ တတ်အောင် ဗဟုသုတ အသိအမြင်တွေရှိအောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပေးခဲ့ကြ..ကျွေးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ် အတောင်စုံ အရွယ်ရောက်လို့ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်နိုင်ချိန်မှာ မိဘတွေကိုလည်း တလှည့်ပြန်ကြည့်ပြီး လုပ်ကျွေးပြုစုပေးကြခြင်းဖြင့် မွေးကျေးဇူး/ကျွေးကျေးဇူးများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကျေအောင် ဆပ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
“ကိုယျ့မိဘကို မသတျမိပါစနေဲ့! မိဘကို အသကျ အသကျသအေောငျ သတျမှ သတျတာမဟုတျပါဘူး”. .သဒ်ဓါတရားမရှိတဲ့ မိဘကို. သဒ်ဓါတရားရှိအောငျ ဖနျတီးမပေးနိုငျရငျ….
အိုမငျးမစှမျးတဲ့ မိဘကို ကိုယျထိလကျရောကျ ပွုစုမပေးပဲ မကျြနှာလှဲခဲပဈ လုပျနရေငျ..၊ကိုယျကတော့ ကောငျးကောငျးစားနပွေီး မိဘတှကေတော့ ကိုယျ့လောကျ ကောငျးအောငျ မစားရဘဲ ခြို့တဲ့နပွေီဆိုရငျ…
ပငျပနျးကွီးစှာ ရှာဖှစေားသောကျနရေတဲ့ မိဘတှကေိုကူညီနိုငျပါလြှကျ မကူညီခဲ့ဘူးဆိုရငျ. .အဲ့ဒါတှထေဲက တခကျြခကျြနဲ့ ငွိနမေယျဆိုရငျလညျး မိဘကို သတျနတောပါပဲ. . . .
ဒီဘဝ တဈသကျတာမှာ မိဘတှေ “တဈဘဝပဲ သမှောပါ” သဒ်ဓါတရားမရှိဘဲ. .သသှေားရငျ ဝိပဿနာတရားတှထှေနျးကားနပေါလြှကျ…ကိုယျ့မိဘ ဝိပဿနာတရားတျောကို မထိတှရေ့ပဲ. .သသှေားခဲ့မယျဆိုရငျ ကိုယျ့မိဘကို တဈသံသရာလုံး သတျနသေလိုပါပဲ. .
ကိုယျ တရားမဟောနိုငျတောငျ ရိပျသာတော့ ရောကျအောငျပို့ပေးကွရမယျ။ ရိပျသာမသှားနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျတောငျ အိမျမှာ ဝိပဿနာအလုပျပေးတရားတျောတှကေို နာနိငျအောငျ ရှု့မှတျတတျအောငျ စီစဉျပေးနိုငျရမယျ. . . .
ကိုယျ့ကို ပညာတတျအောငျ ပွုစုပြိုးထောငျနရေလို့ သူတိုမှာ တရားဘာဝနာကို ငယျငယျက အားထုတျဖို့ အခြိနျမပေးနိုငျခဲ့ဘူး..။ကိုယျက ပညာတတျလို့ ပွနျပွီး ပွုစု ရမယျ့ အလှညျ့ရောကျတဲ့အခါမှာ မိဘကို တရားနဲ့ ကြေးဇူးမဆပျနိငျဘူးဆိုရငျတော့ အဲဒီသားသမီးဟာ မိဘကိုသတျနတောပါပဲ. . ။သားကောငျးသမီးကောငျးမြား ဖွဈနိုငျကွပါစေ. . ။(ဦးမွငျ့ခိုငျ)
မိဘကို ငှကွေေး/စားစရာမြားနဲ့ ကြေးဇူးဆပျသလို တရားဘာဝနာမြား အားထုတျနိုငျအောငျလညျး ကူညီပံ့ပိုး စီစဉျပေးကွပွီး ကြေးဇူးဆပျကွရပါမယျ။
မိဘတှကေ ကိုယျ့ကို သူတို့ရဲ့ ခြှေးစကျတှနေဲ့ ရုနျးကနျရှာဖှကော ပုခုံးထမျးပွီး အမွငျ့ရောကျအောငျ ပညာတှေ တတျအောငျ ဗဟုသုတ အသိအမွငျတှရှေိအောငျ ကွိုးပမျးအားထုတျပေးခဲ့ကွ..ကြှေးမှေးပွုစု စောငျ့ရှောကျခဲ့ကွရပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျ အတောငျစုံ အရှယျရောကျလို့ ရှာဖှလေုပျကိုငျနိုငျခြိနျမှာ မိဘတှကေိုလညျး တလှညျ့ပွနျကွညျ့ပွီး လုပျကြှေးပွုစုပေးကွခွငျးဖွငျ့ မှေးကြေးဇူး/ကြှေးကြေးဇူးမြားကို အတတျနိုငျဆုံး ကအြေောငျ ဆပျကွဖို့ လိုအပျပါတယျ။